Ninka lagu tuhunsan yahay Qarixii Daallo Airlines oo ka mid ahaa Rakaabkii raaci lahaa Turkish Airlines. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ninka lagu tuhunsan yahay Qarixii Daallo Airlines oo ka mid ahaa Rakaabkii raaci lahaa Turkish Airlines.
On Feb 8, 2016 Last updated Feb 8, 2016
Madaxa Fulinta ee Shirkadda Daallo Airlines, Maxamed Ibraahim Yaasiin “Colaad” ayaa tilmaamay in Ninka lagu tuhunsan yahay inuu isku dhex qarxiyey Diyaaradda Daallo uu ka mid ahaa 74-kii qof ee Rakaabka ee asasl ahaan ay soo hubiyeen Shirkadda Diyaaradaha Turkish Airlines oo Toddobaadkiiba 3 Duullimaad ku timaada Garoonka Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho.
“Rakaabkaasi ma ahayn Rakaabkeenna, waxay ahaayeen kuwa Turkish Airlines ee ku qornaa Duullimaadkii ay Turkish Airlines joojisay maalintaasi” ayuu yiri Mas’uulkaasi oo Wareysi siiyey Telefishinka Aljazeera.
Waxa uu intaasi ku daray inay Daallo Airlines loo soo xawilay Rakaabkaasi, kadib, markii ay Saraakiisha Turkish Airlines ku soo wargeliyeen Sarakiisha Daallo Airlines inaysan imaan karin Muqdisho sababo la xiriira dabaylo xooggan oo dhacayey.
Dhinaca kale, Madaxa Fulinta ee Shirkadda Daallo Airlines, Maxamed Ibraahim Yaasiin “Colaad” waxa uu ku eedeeyey Maamulka Turkish Airlines inaysan iyaga la soo xiriirin, tan iyo markii uu Qaraxa ka dhex dhacay Diyaaradda Daallo Airlines maalintii Talaadada ee la soo dhaafay.
“Turkish Airlines nalama aysan soo xiriirin ilaa markii uu dhacay shilka. Waxaana dhihi kartaa inay iska fogeynayaan shilkaasi” ayuu yiri Ma’uulka ugu sarreeya Guddiga Fulinta ee Shirkadda Daallo Airlines.
Sidoo kale, Duuliyihii Diyaaradda Daallo Airlines ee uu qaraxu ka dhex dhacay waxa uu Ammaanka Hareeraha Diyaaradda ee Garoonka Muqdisho la barbar dhigay mid Heer Eber taagan, waa sida uu hadalka u dhigay.
Duuliyaha oo lagu magacaabo Vlatko Vodopivec una dhashay dalka Serbia ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu siiyey Wakaalladda Wararka ee AP ee laga leeyahay dalka Maraykanka, wuxuuna sheegay inuu qarax ahaa wixii ka dhex dhacay Diyaaradda.
Waxa uu intaasi ku daray inuu qaraxu ka xoog badnaan lahaa haddii ay Diyaaradda dhulka u jiri lahayd masaafo dhan 30,000 oo cagood ama Feet.
Waxa uu tilmaamay inay Diyaaradda ku duulaysay Joog Hoose, taasina ay keentay inuu yaraado qaraxa Diyaaradda, isla markaana uu awooday inuu Diyaaradda si nabad ah ku soo degto Garoonka Aadan Cadde.
Hadalkiisa ayaa soo baxay, iyada oo ay Hay’addaha Ammaanka ee Dowladda Federalka gacanta ku hayaan dad lala xiriirinayo Qarixii ka dhex dhacay Daallo Airlines
Telefishinka Dowladda Federalka ee SNTV ayaa baahiyey Muuqaal lagu duubay Kameeradda Qarsoon ee CCTV ee ku rakiban Garoonka Calaamiga ee Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho, taasi oo laga dheehan karo Eedeysanayaasha ka dambeeyey qaraxa Daallo Airlines oo loo adeegsaday bam lagu soo dhex qariyey Laptop.
C/llaahi C/salaam Boorle, oo ah Ninka lagu tuhunsan yahay inuu Qaraxaasi fuliyey ayaa waxa Muuqaalkiisa laga arkay CCTV, isagoo loo dhiibayo Laptop-ka uu ku fuliyey Qaraxaasi.
Mmaydkiisa oo la sheegay inuu si aad ah u go’go’ay ayaa laga helay Degmadda Balcad
Maxkamad ku taalla Britain oo xukun ku riday Muwaadin Somali oo si xun u dooxay haweeney.